Fiarabe nandeha mafy : nifandona tamina môtô, vazaha iray maty tsy tra-drano | NewsMada
Fiarabe nandeha mafy : nifandona tamina môtô, vazaha iray maty tsy tra-drano
Nirefotra tahaka ny varatra! Izay ny vokatry ny fifandonana môtô sy fiarabe Mercedes Benz iray tany Behenjy, omaly maraina. Môtô nentina vazaha io nifandona tamin’ilay fiara io. Nizara roa mihitsy ilay môtô, nipitika tany amin’ny 25 metatra miala ny arabe ny lohany, fa ny vatany tavela teo amin’ny arabe. Azo sary an-tsaina amin’izany ny nahazo ilay vazaha, izay tena voa mafy ka nitarika ny fahafatesany teo noho eo. Ilay fiarabe kosa nivadika ary niala hatramin’ny kodiarany sy ny fitarany eo aloha.
Araka ny fanazavan’ny nahita maso ity loza ity, nisongona fiara Sprinter iray ilay fiarabe kanjo nifanehatra tamin’ilay môtô. Nolazain’ny olona fa nandeha mora ity kodiaran-droa fa ilay fiara no nandeha mafy. “Niala ihany ilay vazaha saingy tsy afaka intsony”, hoy ny filazan’ny nahita maso.
Nitodi-doha ho aty Antananarivo ilay môtô raha ho any Antsirabe kosa ilay fiara. Tonga teny an-toerana ny zandary nanao ny fizahana ity loza ity. Raha ny vaovao azo, efa voatanan’ny mpitandro filaminana ilay mpamily io. Mandeha ny fanadihadiana rehetra manodidina ny lozam-pifamoivoizana.
Raha ny filazan’ny olona eny amin’iny faritra Behenjy sy ny manodidina iny ihany, matetika isehoana loza eny an-toerana noho ny lalana somary mahitsy kanefa misy fiolanana matetika. Mandeha mafy ny fiara, izay mihevitra ho efa za-dalana kanefa, izao mamoa-doza izao. “Efa maro ihany izay loza niseho izay. Raha tsy mifandona, mivarina an-tanimbary. Matetika amoizana ain’olona hatrany”, hoy ny tompon-tanàna.